T Shirt, Akanjo Polo, Hoodie, akanjo ba - LOTTE
manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny valiny farany
Rehefa nahazo ny fanontanian'ny mpanjifa dia hifandray amin'izy ireo ao anatin'ny 1 ora ny ekipanay mba hanamafisana ny antsipiriany rehetra ary hanolotra ny sosokevitra mety
Famolavolana sy fampandrosoana ny vokatra
Ny ekipa mpamolavola anay dia manao ny esoeso ho fangatahanao ary mandefa anao ny sangan'asa farany ho fankatoavana anao. Volavola iray aorian'ny fankatoavana dia nalefa tany amin'ny famokarana.
Santionany mialoha ny famokarana
Fandraisana ny santionany mialoha ny famokarana, arakaraka ny famantarana sy fika amin'ny takelaka teknika nankatoavina, misy lamba sy loko misy, ary koa loko LAB DIPS ho fankatoavana
Famokarana faobe & fanaraha-maso kalitao avo roa heny
Rehefa manomboka ny famokarana betsaka, ny ekipan'ny mpandinika kalitao dia manara-maso mivantana ny fizotry ny famokarana rehetra mba hitazomana ireo vokatra vita izay marina izay mitovy amin'ny santionany alohan'ny famokarana ekena.
Chain azo itokisana
Amin'ny maha mpanamboatra za-draharaha 20 taona anay dia nanana ny famaranana ny rojom-panomezana izahay, avy amin'ny akora simba ka hatramin'ny kojakoja isan-karazany, toy ny kofehy, ny fanontana, ny amboradara, ny labozia, ny tongag, sns. akanjo na akanjo hamokarana.
Fahafahana, fanamboarana ary famokarana
Tsy maninona ny akanjo novolavolaina na namboarina ho namboarina. Manana ny ekipa sy ny traikefa ilaina izahay amin'ny fanatanterahana ireo karazana tetikasa rehetra. Manana tsipika famokarana 3 lehibe ho an'ny t shirt, polo shirt, hoody & palitao izahay. 300 000 eo ho eo ny vokatra isam-bolana.
Izahay dia mitazona fanamafisana tsy tapaka amin'ny kalitao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso indroa ny akanjo alohan'ny hanaterana ny mpanjifa.
Inona no dikan'ny OEM / ODM amin'ny akanjo ma ...
Famokarana mafana amin'ny ririnina any Lotte Garm ...